Konke odinga ukukwazi ukubala isizinda sakho | Ezezimali Zomnotho
USusana Maria Urbano Mateos | | Umsebenzi
Inkinga yabasebenzi eSpain ayikapheli. Yebo, ukuqashwa kuthuthukile kule minyaka emibili edlule, kuncane kakhulu, kepha sekuthuthukile, yize ukuntuleka kwemisebenzi kusaphezulu kakhulu. Okubuye nakho okulethile ukuthi ukuqashwa okwenziwe kuguquguquka kakhulu futhi kunenzuzo eningi. Lokho sekwenze ochwepheshe abaningi baseSpain ezintweni eziningi, nesidingo sokuba njalo. Isibonelo ukwazi ukuthi indawo yokuhlala ibalwa kanjani.
Noma kungafanele sicabange ukuthi izinkampani ziyasikhohlisa, kufanele sinakekele ngaso sonke isikhathi, ngoba kukhona “amaphutha” athanda izinkampani kakhulu kunathi, abasebenzi bakho, futhi asiqapheli, asazi ukuthi izibalo bezilungile yini, futhi kwesinye isikhathi, siqala ukusayina, ngaphandle kokuqiniseka ngalutho.
Yazi ukuthi ungayibala kanjani indawo yokuhlala Izokuvumela ukuthi ukwazi konke lokhu futhi uvikele amaphutha angakulimaza, futhi, ngaphezu kwakho konke, hamba phambili kwenkampani.
Asisho ukuthi konke izinkampani zimbi futhi zimbi emhlabeni, kepha kuhle njalo ukwazi konke okuthinta ephaketheni lethu.
Uma ekugcineni kwendatshana unemibuzo, noma uthola amaphutha ekubalweni kokuhlala kwakho, Sikukwazisa, okokuqala, ukuya enkampanini ukuxazulula amaphutha, futhi uma kungenzeki, iya ku- ummeli onguchwepheshe ezindabeni zabasebenzi, inyunyana yakho, noma umfelandawonye lapho ubhalise khona.
1 Yini indawo yokuhlala
2 Ingabe ukubalwa nokusayinda kokukhokhiswa kuyisibopho?
3 Kusho ukuthini ukusayinwa kwesivumelwano?
4 Ukuhlala kufanele kufake ini
5 Ibalwa kanjani indawo yokuhlala
Yini indawo yokuhlala
Ukuhlaliswa kuvela egameni lesiLatini elisho ukuthi 'qeda'.
Kungumbhalo owenziwa lapho ubudlelwano bokuqashwa phakathi kwabasebenzi nenkampani buphela, nalapho kwamukelwa khona lokho izibopho nokuzibophezela kwabo bobabili kubhekwe ngesikhathi esifanele.
Ngumbhalo osemthethweni, futhi uqukethe yonke imininingwane yobudlelwano obufihliwe, kusuka imininingwane ejwayelekile, amaholide akhokhelwayo, nemininingwane engapheli ukuthi sizokutshela ngokuhamba kwesikhathi.
Masithi, ngamanye amagama, ukuthi ukukhokhelwa kungumbhalo osemthethweni olinganisa amalungelo omuntu maqondana nenkampani, nakho konke lokhu okushoyo nokusalindile noma cha.
Ukukhokhelwa kungasho ukuthi zonke izibopho zenkampani zimboziwe ngesisebenzi, nokuthi ibhalansi ayi-zero, kodwa futhi, obekulindelwe izinsuku ezithile zeholide, noma, kunalokho, ukuthi sekusele izinsuku ezimbili ngaphandle kwesizathu.
Ingabe ukubalwa nokusayinda kokukhokhiswa kuyisibopho?
Akudingekile njengoba kunjalo kuphela ukulingana kwesimo somsebenzi lapho beveza khona, zombili izinhlangothi, ukuthi azikho izikweletu, noma ukuthi zikhona, ezichaza ukuthi ziyini nokuthi zizocinywa kanjani.
Yize nge ngokomthetho lo mbhalo wenziwa lapho ubudlelwano bokuqashwa buphela.
Isiginesha yomsebenzi kufanele ibe khona, kodwa kunemibandela ethile. Uma umsebenzi engavumi, angasayina nensumansumane ethi "akuhambisani". Lokho wukuthi, iyayamukela idokhumenti, kepha hhayi amanani noma imiqondo equkethe.
Ungala futhi, kepha lokho kusho ukuthi ungatholi inani lemali elikuyo, futhi kwezinye izimo, ukulahlekelwa yisikhathi sokucubungula umhlomulo wokungasebenzi, uma unelungelo lawo.
Kusho ukuthini ukusayinwa kwesivumelwano?
Ukusayina inkokhelo kuphela kusho ukuthi uthole inani lemali elishiwo lapho. Akusho ukuthi, njengoba sikutshelile ngaphambili, ukwamukela ubuningi nokubalwa kwabo.
Izinkampani zivame ukubeka umbhalo lapho isiginesha isho ukuthi isisebenzi samukela, nokuthi akukho zimangalo noma ukucaciswa okungenziwa ngemuva kosuku lokusayina idokhumenti. Kuyisivikelo esisemthethweni nesicacile esisetshenziswa abaningi.
Okufanele ukwenze, Siyagcizelela, usho ukungavumelani kwakho, usayine futhi ubeke inganekwane ethi 'Angikutholi ukuhambisana'.
Uma ungasayini, kufanele uye esivivinyweni nakwezinye izinqubo ezithatha isikhathi. Inqubo nokufunwa kuzoba ngaphambi koMnyango Wokulamula, Ukulamula kanye Nokubuyisana (SMAC).
Ukuhlala kufanele kufake ini
Ngaphambi kokubona ukuthi isibalo sokukhokha senziwa kanjani, kufanele ukwazi ukuqonda idatha equkethwe yidokhumenti, nokuthi kufanele iqukathe ini, uma ngabe kukhona okungaveli.
Okufanele kufakwe ukukhokha lokhu okulandelayo:
Imininingwane ephelele, ephelele yenkampani kanye nesisebenzi esibambe iqhaza ebudlelwaneni bokuqashwa
Umholo usalindwe ukukhokhwa kuze kube yilapho sekukhishwe ukukhokhelwa
Ingxenye elinganiselwe yemiholo (imisebenzi) engavamile umsebenzi anelungelo lokuyithola
Isabelo esilinganayo semali ekhokhelwa inzuzo
Amaholide angajabulelwa yisisebenzi. Ziyi-2,5 ngenyanga.
Izinzuzo ezingakhokhiwe, ezivela kwinkontileka, njengemiklomelo yokukhiqiza, ukugcina isikhathi, isikhathi esengeziwe, njll.
Zonke izikweletu, nganoma yisiphi isizathu
Inani lesinxephezelo akudingeki livele enkokhelweni, ifakwa kaningi encwadini yokuxoshwa, noma ngemininingwane yonke embhalweni walesi sigaba.
Futhi akudingekile ukuthi idokhumenti iqukathe igama 'ukuhlala' esihlokweni, kusukela ekuwohlokeni kwemiqondo nomqondo webhalansi yesikweletu, thatha kancane ukuthi kuyini.
Kuyisihluthulelo futhi ukucela okusalungiswa noma kusengaphambili kokukhokhelwa ukuze ukwazi ukubuyekeza amanani bese ucacisa konke ngaphambi kokukhokha kokugcina.
Ibalwa kanjani indawo yokuhlala
Akunzima kakhulu ukubala ukuhlala okuhambelana nawe, neminye imisebenzi nemithetho kokuthathu uzokwenza cishe imizuzu eyi-10 ubuningi.
Uzodinga le datha, ngamanani ayo ngqo:
Umholo wesikhathi sokugcina
Amaholide onelungelo lawo, kodwa ongawathokozelanga
Thatha isibonelo sesisebenzi esadilizwa emsebenzini ngoSepthemba 22. Umholo wakhe wawungu- € 1.000 ngenyanga (uyisisebenzi esinenhlanhla) ngemali engu- € 100 ngohambo, nezinkokhelo ezimbili ezengeziwe ze- € 1000.
Ake sibale umholo
Kuzofanele sibale umholo wansuku zonke.
Lokho wukuthi, sifaka i- € 1.000 kanye ne- € 100 yokuhamba bese siwahlukanisa ngama-30, izinsuku ezakha inyanga, ngenhloso yentela.
Lokhu kungukuthi: € 1.100 / 30 izinsuku: € 36,66 ngosuku.
Uma waxoshwa ngoSepthemba 22, futhi wonke umholo wakho usukhokhiwe, isikweletu ngesezinsuku ezingama-22 kuphela
Siphindaphinda i- € 36,66 ngezinsuku ezingama-22.
Isikweletu ngu- € 806,52.
Manje ake sibale izinsuku zeholide.
Ake siqale sibale izinsuku.
Sinokuthi kunezinsuku ezi-2,5 ngenyanga. Kuze kube ngu-Agasti, isisebenzi kulesi sibonelo sinezinsuku ezingama-20. Selokhu axoshwa ngoSepthemba, unezinsuku eziyi-1,6 ngaphambi kukaSepthemba 22.
Siphindaphinda izinsuku ezingama-21,6 ngomholo wansuku zonke, we- € 36,66.
Eholidini, njengoba ebengenakujabulela noma yiluphi usuku, yi- € 791.85.
Manje kufanele sibale inkokhelo eyengeziwe
Izinkokhelo ezengeziwe zihlukaniswe izikhathi ezimbili, ezivalwa ngoJanuwari 1 noJulayi 1.
Njengoba lesi sisebenzi sasebenza kuze kube nguSepthemba 22, unelungelo lokuthola imali eyengeziwe yasehlobo, eyi- € 1.000.
Esiwombeni sesibili sesibili, usebenze izinsuku ezingama-82.
Siphindaphinda izinsuku ezingama-82. Njengoba kuyisemester ngayinye, yi- € 1.000 phakathi kwezinsuku eziyi-180 (uhhafu wonyaka), futhi iphindaphindwe ngezinsuku ezingama-82 ezithathayo. Zingu- € 453.03.
Manje sibala indawo yokuhlala.
Siyengeza: Amaholo Omholo + Inkokhelo eyengeziwe.
Kulokhu: € 806,52 + € 791.85 + € 1.453.03.
Isinxephezelo kufanele sibe ngu- € 3.051,4.
Uma kunokuningi okuqukethwe kwinkontileka, kufanele kungezwe kulelo nani eliphelele.
Esikhundleni salokho, ake sicabange ukuthi ukujabulele Izinsuku ezingama-30 zekhalenda, futhi ahambelana kuphela nama-21,6 njengoba sibonile. Ngemuva kwalokho, inani lizokhishwa futhi lingangezwa kwisamba esiphelele, lishintshe ngokuphelele inani lokukhokhelwa cishe ngama- € 600 ngaphansi.
Okufanayo kukhokhelwa imali eyengeziwe: Ukube isisebenzi besithole izinkokhelo ezimbili ezengeziwe njalo ngenyanga, bekungekho ukubalwa kwemali eyengeziwe, iholide nomholo kuphela, futhi nokuguqula inani libe ngamanani ahluke kakhulu.
Kuyafana uma imali eyengeziwe ekhokhwayo esikhundleni sokukhokhelwa unyaka nonyaka, ikhokhwa minyaka yonke, amanani ayashintsha.
Buyekeza yonke leyo mininingwane, bese uyisekela esivumelwaneni.
Asizange sikhulume ngawe ku- Ngibala inkokhelo yakho yokuyeka umsebenzi, ngoba lokho kuvamise ukungena komunye umqulu noma encwadini yakho yokuxoshwa futhi akuyona ingxenye yesivumelwano, imvamisa, futhi kubalwa ngakunye kuso.
Ngaphezu kwalokho, uma bekunezikweletu ezisuka kusisebenzi ziye enkampanini, ngokwesibonelo, imali ekhokhelwa abasebenzi, ukuthengwa kwemikhiqizo yabo, ngokwesibonelo, into esebenza ngogesi, bayasuswa kunani eliqongelelwe.
Kwesinye isikhathi umphumela uba muhle kusisebenzi, futhi kwezinye izikhathi, kuphumela kuziro, konke kungenzeka ezibalweni ezinjengalezi.
Isivumelwano siyibhalansi yezibopho zenkampani nomsebenzi futhi okuphambene nalokho, kuze kube umzuzu wobudlelwano bokuqashwa buphela. Kubandakanya ukukhokha okulindile okuqoqwe yinkontileka, okungahle kuvune isisebenzi noma inkampani.
Iya kummeli oyingcweti, usayine ngokwalokho okutholayo, ngaphandle kokuphoqwa yinkampani, futhi njalo nenganekwane ethi 'ayithobeli' uma kukhona okuthile okuxakile endaweni yokuhlala.
Bala indawo yakho yokuhlala ngokwakhoNjengoba ukwazi ukubona, ilula kakhulu, futhi ngaphezu kwakho konke, ngokushesha, ku-intanethi kunezinhlelo eziningi namafomu azibalayo ngokuzenzekelayo, uma ungazethembi izibalo zakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Umsebenzi » Ungayibala kanjani indawo ohlala kuyo
Ngabe uyazi ukuthi ungakusebenzisa kanjani ukubuyiswa kwemali emakethe yamasheya?
Amakhadi avela ezitolo ezinkulu enza ukuthenga kushibhile